आजकल को व्यस्त लाइफस्टाइल र भागदौर भरेको जीवनमा तनाव हुनु सामान्य कुरा हो ।सामान्यता यसको गुनासो हरेक मान्छेले गरिरहेका छन्। कि मस्तिस्कलाई
कसरी शान्त गर्ने । चाहना भन्दा बढीको बोझ र राम्रो स्वास्थ्य को लागि समय न निकाल्न पाउनुले हाम्रो मस्तिस्क को स्वास्थ्य को लागि गम्भीर नुक्सान हो। तपाइले यो कुरा सुन्नु भए होला कि राम्रो सेहतमंद जीवन को लागि मस्तिस्क र मन शान्त हुन् अतिअवस्यक हुन्छ। आज मैले तपाइलाई यस्तो तरिका बताउने छु जसले गर्दा तपाइको मस्तिस्क चार गुना तेज भइहाल्छ । विश्वास गर्नुस यो तरिकाको प्रयोग पछि तपाइको मस्तिस्क घोडा जस्तै दगुर्न थाल्छ।
यो तरिका बाट तपाइको सोच्ने र बुझ्ने शक्ति तेज भइहाल्छ । आजको समयमा मान्छेहरुको जीवन यति व्यस्त भइ सकेको छ। कि तिनिहरुलाई एक सेकेन्ड को लागि बसेर सोच्ने मौका छैन । त्यहि भएर व्यक्तिले आफ्नो मस्तिस्कलाई शान्त राख्न सकेको छैन । यदि साचिकै भन्ने हो भने आजको समयमा कसैलाई पैसाको,कसैलाई खाना को र कसैलाई माया को चिन्ता भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यो आवस्यकता छ, कि व्यक्तिले आफ्नो जीवन को यी समस्याहरुलाई बिर्सेर एक्लै समय बिताउने र आफुलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने। यो ट्रिक अनुसार सब भन्दा पहिला आफ्नो मस्तिस्कलाई स्थिर पारेरा एक ठाउमा आराम संग बसने। त्यस पछि तपाइले आफ्नो कानमा एउटा आवाज ध्यान दिएर सुन्नु छ ।
Also Read:- राम्रो र असल व्यक्ति बन्ने मुख्य ५ वटा तरिकाहरु
तपाइलाई यो कुरा जानकारी को लागि बतैदिम कि यो अन्जान आवाज हाम्रो शारीर बाट आएको हुन्छ । अस्चार्यजनक कुरा यो हो कि त्यो आवाज तपाइलाई सुनाई दिन्छ ।जसरी कानमा झिंगा भन्केको महसुस हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मस्तिस्कलाई शान्त राखेर यो आवाजलाई बुझ्ने । र यसको गहिराई लै समात्ने प्रयास गर्ने । येकिनन यो तरिकाले तपाइको मस्तिस्कलाई यस्तो दिशा मिल्छ । कि तपाई अस्चार्यचाकित भइहाल्नु हुन्छ । यो काम्तापैले मात्र १० मिनेट गर्नु पर्छ।
साचिकै यो तरिका बात तपाइको यति धेरै बुझ्ने सोच्ने शक्ति बढी हाल्छ कि तपाइलाई बिस्वास नै लाग्दैन। यहाँ सम्म कि यो तरिका प्रयोग गर्नाले तपाइलाई हरेक काम सजिलो लगना थाल्छ। तर यदी तपाइले यो तरिका सुत्नु भन्दा पहिला प्रयोग गर्नु भयो भने तपाइलाई धेरै राम्रो हुन्छ । किनकि रातिको समयमा तपाइलाई कुनै काम को चिन्ता हुदैन । र तपाइले यो तरिका मा राम्रो ध्यान दिन सक्नु हुन्छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो तरिकाको मदतले तपाइको हरेक उद्देश्य पुरा हुनेछ।
Also Read:- यी काम गर्नाले राम्रो निद्रा आउछ |
ShareTweetSharePin0 Sharesस्मार्ट कसरी बन्ने ? How To Become Smart ? In Nepali नमस्कार साथीहरु, आज मैले तपाईहरुको लागि एकदम उपयोगी सुझाव साझा गर्न गइरहेछु| जसबाट तपाइले यो सिख्नु हुन्छ| कि “स्मार्ट कसरी बन्ने” के तपाइले कुनै केटीलाई मन पराउनु हुन्छ, तर तपाइको व्यक्तित्व उसँग मेल खादैन, तपाई उसको जस्तो स्मार्ट […]
International Youth Day 2020: Quotes, Status, Messages, Wishes And More